Tranonkala mahaliana 15 mahafinaritra hahafinaritra amin'ny fotoana rehetra - Fialam-Boly
Tranonkala mahaliana 15 mahafinaritra hahafinaritra amin'ny fotoana rehetra
Amin'ity taranaka ity isaky ny mankaleo ianao ary tsy manan-javatra atao, ny ataontsika rehetra dia manandrama mitady zavatra amin'ny Internet satria fantatrao fa ny Internet dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra hamonoana ny fotoanao.Afaka mahita tranokala mahavariana sy mahaliana isika izay afaka manampy antsika hamono fotoana isaky ny maniry izany isika.
Izaho koa dia nahita olona sasany izay mbola mandany ny ankamaroan'ny fotoanany amin'ny tranokala malaza efa nahazatra azy ireo ihany.Eto aho dia nahita tranokala tena mahafinaritra sy mahaliana izay tiako zaraina aminareo lahy.
Ka, iray andro monja dia tsy mila mitsidika tranokala hafa ianareo ry zalahy ary mijery ireo tranonkala mahafinaritra sy mahaliana ireo, izay afaka manampy anao hamono ny fotoananao ary koa mety hianatra zavatra mahatalanjona iray na roa ianao eo am-pahatongavana eo.
Lisitry ny tranonkala mahafinaritra mahaliana:
Eny ary, amin'ny ankapobeny, ity tranonkala ity dia miatrika izay rehetra mahatsikaiky eo amin'ny tontolon'ny internet. Hainay ny zava-misy fa tia atiny mahatsikaiky daholo ny tanora, sa tsy izany?Ity tranonkala ity dia miompana indrindra amin'ny atin'ny sary ary koa ireo lahatsoratra eto dia tena mahafinaritra loatra ny mamaky azy. Hahafinaritra anao ny mamaky azy io.
Mety ho leo ny panda. Saingy, tsy afaka mankaleo mihitsy ianao raha mitsidika an'ity tranonkala ity. Tena azonao andramana izany.
Ity dia iray amin'ireo tranonkala malaza indrindra eo amin'ny tanora sy ny tanora. Naka aingam-panahy avy amin'ny tongolo izy.
Ity tranonkala ity dia manolotra lisitra, lahatsoratra izay misy sary mampihomehy misy sary ary koa GIFs izay mahatsikaiky izay mety hampihomehy anao na olona na oviana na oviana.
3. Fanafihana ny mahafatifaty
Ny fanafihana ny tranokala Cute dia mampiseho anao sary be dia be amin'ny biby samihafa. Izay tia biby dia lasa adala amin'ny fitsidihana an'ity tranonkala mahafatifaty ity. Fantatrao ve izany fahatsapana 'aww' izany? Eny, avy eo mila mitsidika an'ity tranonkala ity ianao.
Eny ary, noho izany dia tranokala majika ity tranonkala ity na mahatsiaro tena ho iray. Eto dia azonao atao ny mieritreritra ny toetra amam-panahy manerantany ary amin'ny alàlan'ny fanontaniana maromaro dia hanome anao ny anarana marina ananan'ny olona na toetra izay noeritreretinao.
Tsaroako rehefa nampiasa an'ity aho tamin'ny voalohany, nangataka ahy ny namako mba hieritreritra mpilalao sarimihetsika rehetra ary hamaly fanontaniana vitsivitsy. Tsy nino ny masoko aho rehefa naseho ny valiny. Gaga be fotsiny aho tamin'ity tranonkala ity.Raha tsy mino ahy ianao dia afaka mandeha tokoa ary manandrana ho an'ny tenanao.
Eritrereto, indray andro any manapa-kevitra ny handrahoana sakafo matsiro ho anao na ny fianakavianao iray manontolo ianao. Saingy, tsapanao tara be fa tsy manana ny akora ilaina. Ary avy eo dia manontany tena ianao hoe inona no lovia azonao andrahoana sakafo miaraka amin'ireo akora misy ao an-dakozia.
Eny, izao dia voasarona ny olanao satria izany no azon'ny Supercook manampy anao. Hanombohana azy, azonao atao ny manampy ireo singa misy ao an-dakozia, ary avy eo ity tranonkala ity dia hanolotra anao ny lisitry ny lovia izay azonao atao mahandro amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo entana misy ireo fotsiny.
6. WiKi Ahoana
Noho izany, ity tranonkala ity dia manampy anao amin'ny zava-drehetra. Io no valin'ny fanontanianao rehetra. Raha mila mitady fomba hanaovana zavatra ianao, na zavatra mahavariana DIY na lesona na zavatra hafa, dia azonao atao ny mahita azy eto. Azonao atao koa ny mametraka fanontaniana eto na mamaly ny fanontanian'ny olon-kafa koa.
Ity dia toerana iray izay mizara hevitra sy fahitana avy amin'ny olona mahomby indrindra manerantany. Amin'ity tranonkala ity dia tsy hahita hacks amin'ny fiainana ianao. eto, fa hahazo tena vaovao ianao. Azonao atao koa ny mianatra avy amin'ny lesoka nataon'ny hafa sy ny tantaram-pahombiazany. Azo antoka fa toerana tsara hahalalana amin'ny olona ny fomba nahombiazany tamin'ny fiainany. Manampy be dia be ho an'ny olona te ho mpandraharaha ary manomboka ny orinasany manokana na izay mitady hahomby amin'ny sehatra rehetra.
8. Alika kely
Tia alika ve ianareo? Sa manana biby any an-trano aza ianareo? Noho izany, ity tranokala eto ity dia mampiseho anao GIF sy horonan-tsary kely misy alika kely sy alika kely mahafatifaty izay mahafatifaty sy mahafinaritra fotsiny.
Ho lasa adala fotsiny ianao mahita azy ireo. Ny tiako holazaina dia hoe, ny tenako dia nahita an'io ary marina, nanatsara kokoa ny androko io. Ny horonan-tsary rehetra dia aseho amin'ny efijery feno kalitao avo lenta. Raha tia alika ianao dia ho tianao ity tranonkala ity.
Fantatsika rehetra fa Spotify dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra hahitana mozika. Na izany aza, ny hany olana dia, ny katalaogy midadasika dia manohana ireo artista malaza. Noho izany, eto amin'ity tranokala ity, ny Fogetify dia manampy anao hahita mpanakanto tsy dia malaza loatra nefa koa mamokatra mozika mahafinaritra miaraka.
Forgetify dia toerana mahatalanjona mahita mozika sy mpanakanto vaovao koa.
GIPHY dia manana ny GIF malaza indrindra hita ao amin'ny tranonkalany izay mivezivezy an-tapitrisany amin'ny Internet ankehitriny. Mampiasa GIF ny olona satria fomba fanehoana ny tenanao amin'ny fomba mahatsikaiky sy tsy manafintohina. Afaka mahita GI be dia be isika amin'ny toe-javatra rehetra. Ankehitriny ny olon-dehibe rehetra dia tia GIF.
Zahao ity tranokala ity raha mitady ho hypnootis ianao, eto amin'ny tranonkala dia asehony anao amin'ny ankapobeny ny sary iray izay manakaiky tsy hita fetra mba hanambarana sary vaovao ao amin'ilay sary. Noho izany, faribolana misy sary tsy misy farany io.
CoolThings dia manana fanangonana ireo zavatra mahafinaritra rehetra. Na fialam-boly, gadget, na koa kilalao sy famoronana, dia misy zavatra tena mahaliana anao eto ary hahatonga anao ho adala azo antoka. Misy aza ny fizarana fanomezana tena mahafinaritra sy tsy manam-paharoa misy izay mizara sokajy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Ity tranonkala ity dia manavao isan'andro, koa azo antoka fa miverimberina indraindray mba hahazoana zavatra na fanomezana mahafinaritra na zavatra hafa.
13. Foko tsy mifandray
Ity tranonkala ity dia miresaka momba ny fanangonana horonan-tsary, sary, ary koa tantaram-poko tsy mifangaro izay miparitaka erak'izao tontolo izao. Manome anao tantara mahaliana sy fomba fijery mahaliana momba ny fomba fiainan'ny olombelona izay tsy voakasiky ny haitao ankehitriny, ny fitaovana elektronika ary ny endrika maoderina hafa amin'ny fiainana. Ary koa, manome anao fotoana hahafahana manome ho an'ny tanjon'izy ireo izany. Azonao atao ny mitsidika an'ity tranonkala ity ary mijery azy.
PostSecret dia tranonkala mahafinaritra sy mahaliana.Ao amin'ity tranonkala ity, misy karazana tsiambaratelo amin'ny karazana karatra paositra izay mahatonga ity tranonkala iray tena mahaliana.ny
ll, entanina ireo mpitsidika handefa karatra paositra tsy fantatra anarana izay anoratany ny tsiambaratelony.
Patatap dia tranokala tokana sy mifandraika izay mamaly ny fanalahidy eo amin'ny fitendrenao miaraka amina feon-teny samihafa ary fampisehoana fohy ihany koa. Alao an-tsaina fotsiny ny famonoana amin'ny fehezanteny iray manontolo sy ny BOOM! Nahazo fipoahana feo, loko ary fihetsehana ianao! Tsara, sa tsy izany?
Raha vantany vao manomboka manoratra amin'ny andininy vitsivitsy ianao, dia lasa tena hypnotic, any lavitra. Fomba mahafinaritra ny miala sasatra sy miala sasatra. Azo antoka fa hankafy an'ity ianao.
Nanonona tranokala mahafinaritra sy mahaliana etsy ambony izahay. Noho izany, amin'ny manaraka indray isaky ny mankaleo ianao ary tsy fantatrao izay tokony hataonao ary manam-potoana malalaka ianao dia aza laniana fotsiny amin'ny fandehanana any amin'ireo tranonkala malaza taloha vitsivitsy ary mijery hatrany io zavatra io ihany. Ireo tranonkala rehetra ireo dia misy zavatra na hafa hampiala-voly anao. Tsy hampifalifaly anao fotsiny izany, fa koa ireo manodidina anao amin'ny alàlan'ny fananganana anao hizara ireo tranonkala ireo amin'ny namanao sy ny fianakavianao ihany koa.
Tsidiho fotsiny ireo tranonkala mahaliana ireo fa miala sasatra ny sainao sy mankafy.
Mety ho tianao ihany koa:
Tranokala lalao tsy voasakana
Ny zava-drehetra momba an'i Camila sy The Challenge
Messiah Season 2: Nohamafisina na nofoanana ny datin'ny famoahana ao amin'ny Netflix!
xbox 1 kaody mpikambana volamena
lisitry ny lalao an-tserasera maimaim-poana
raha manana spotify ianao dia mahazo hulu
aiza no ahitana sarimihetsika an-tserasera
manandrama minecraft maimaim-poana amin'ny Internet tsy misy rindranasa
tranokala azonao jerena fandaharana amin'ny fahitalavitra
tranokala vaovao an-tserasera maimaim-poana